Munaasabad lagu taageerayo dowladda KMG ee Midnimada Qaran | savanne forum
Home » Blogs » somalichradio's blog
Munaasabad lagu taageerayo dowladda KMG ee Midnimada Qaran oo Ka Dhacday Kanton Luzern ee Dalka Switzerla Xaflad ballaaran oo si aad ah loo soo agaasimay, laguna taageerayey Dowladda KMG ah ee Midnimada Qaran ee uu hoggaaminayo Madaxweyne Sh. Shariif Sheikh Axmed ayaa lagu qabtay shalay galab Kanton Luzern ee wadanka Switzerland Xafladan oo ay soo Qaban-qaabisay jaaliyadda soomaliyeed ee magaalada Luzern ayaa waxaa ka soo qayb galay dhamaan Soomaalida ku nool kantoon Luzern oo isugu jira Culumo, Ciroole, Dhallinyaro, Haween iyo Caruurba, waxaa kaloo lagu marti qaaday marti Sharaf ka kala timid Kantoonada Dereska la ah Kantoonka, sida: ZÃ¼rich iyo Aarau.
Xafladdan lagu taageerayey Dowladda Cusub ee ka hanaqaaday dalka Soomaaliya oo hoggaanka u hayo Maxadweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo dhallinyaro kale Aqoonyahanno ah oo ka muuqata rabitaan Waddaniyadeed, waana dowladdii uga horreysay oo dadka Soomaaliyeed uga baaqday in dalka lagu dhaqaayo Diinta Islaamka.
Ugu horayntii waxaa Xafladan lagu furay Ayadaha Quraanka Kariimka, ka Dib waxa lagu Soo dhaweyey Mikorofonka mid ka mid ah Culimada ku dhaqan magaalada Luzern oo dadkii halkaas isugu yimid ku wacyi geliyey inay ku dadaalaan inay adkeeyaan ku dhaqanka diintooda iyo sidii caruurtooda ugu barbaarin lahaayeen tarbiyada Diinta Islaamka.
p3010074waxaa furitaanka Xafladan Khubad kooban ka jeediyey Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kanton Luzern Cabdullaahi Cabdi(Cabdullaahi Dheere) oo si aad uga hadalay sidii ay Jaaliyaddu u muujin lahaayeen midnimadoodaiyo sidii ay isaga warqabi lahaayeen.
Guddoomiye Cabdullaahi Dheere ayaa wuxuu ugu mahad celiyey dadkii ka soo Qayb Galay Xafladan iyo Marti Sharafta oo ka aqbashay Casuumadda inay goobjoog ka noqdaan Xafaladan.
Waxaa kaloo Xafladdaas hadal Guubaabo ka jeediyey Xohayaha Xiriirka Jaaliyadaha iyo Integrationka ee Ururka â€œRajoâ€ Axmed Dhicisow Daauud oo si aad ah uga hadlay qiimaha ay leedahay wax wada qabsiga iyo in qofka Soomaaliga ah uu ku faano dadnimadiisa iyo Diintiisa, taas haddii laga waayo in qofka Soomaaliga ah uu qiimo jab ku imaan karto dadnimadiisa.
Sidoo kale waxaa goobtaas ka hadlay qaar ka mid ah Ururrada Bulshada Sida: Culumada, Odayaashaa dhaqanka, Dhallinyaro iyo Haweenka ee ku nool degmada Luzern oo dhamaantooda ka wada hadalay qiimaha Dalka iyo Calanka Soomaaliyeed oo dadkii ka soo qayb galay munaasabaddaas Qiiro wadanimo gelisay.
p3010049Dhanka kale aqoonyahanadii iyo Odayaashii Dhaqanka soomaaliyeed oo ka mid ah jaaliyadda magaalada Luzern ee halkaas ka hadlay ayaa waxay dowlada cusub ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan soo celinta amniga iyo kala danbaynta wadanka, horayna u sii wadaan wada-hadalada iyo dib u heshiisiinta guud ahaan, si loo gaaro in Soomaaliya ay mar labaad cagageeda isku taagto.
p3010065Hase yeeshee waxaa dadkii halkaas joogay ay si taxadar leh u dhegeysteen qof ka mid ah Aqoonyahanada deggen magaalada Luzern oo magaciisa la yiraahdo Sheikh Cali Baashi oo sii aad ah uga hadlay qiimaha ay leedahay Nabad galyadu iyo sida loogu bahan yahay in la tagero Dawlada cusub.
Sheikh Cali Baashi oo ayaa Soomaalida uga hadlay dhanbaal uu u soo diray Soomaalida qof ka mid ah Cuumaaâ€™udiinka ugu tunka weyn Caalamka Islaamka oo si aad ugu hadlay waxa Diinta Islaamka ay ka qabto in la bannaysto dhiig qof Muslim ah.
Ugu danbeyntii waxaa sidoo kale halkaas ka hadashay qof ka mid ah Haweenka deggen magalada Luzern oo sheegtay in haweenka ay yihiin kuwa dhibaatada uga badan soo gaartay, waxayna Soomaalida ku guubaabisay inay gacmaha is qabsadaan, midnimada ka shaqeeyaan.
Goobta Xafladda ka dhacday ayaa waxaa la keenay Cunta dhaqameydka Soomalida oo kala duwan oo dadkii isugu yimid manaasabaddaas ay cuneyn, waxayna xafladdaas ku dhammaatay Reynreyn iyo Farxad.